Sein Lyan - စိ န် လျှံ: တလအတွင်း ဘလော့ဂါ သတင်းစဉ်
Writer Sein Lyan Time 8:18 pm
မနည်းကိုစဉ်းစားပြီးဖတ်ရတယ်။ :) ဒါတောင်အားလုံးသိဘူးးးးး
28 June 2010 at 04:47
အားလုံးကို သိတယ်။း)
သတင်းစုံလင်မှာ ...... :P
မျောက်ဘွဲ့ ခံယူထားသော သတင်းကြေငြာသူမှာ...
လက်ကမ်းစာစောင်များ ဝေရခြင်းကို အကြောင်းပြလျက်...
အဝတ်အစား အသစ်လိုချင်တယ်...ဟု.. တဂျီဂျီပူဆာနေကြောင်း
လိုချင်တာ မဝယ်ပေးလျှင် နှုတ်ခမ်းတစ်တောင်လောက် ရှေ့သို့ ချွန်ထွက် စိတ်ကောက်နေကြောင်းကိုလဲ......
လက်ကမ်းစာစောင်ဝေငှရာ နေရာသို့ လာရောက်စပ်စုအားပေးကြသော ဘလော့ဂါများ မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းကိုလည်း သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။
ကိုရီနို ပြန်လာတော့မယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါကြောင်း...
ကိုသီဟသစ်တို့ မိသားစုလဲ ကျန်းမာချမ်းသာ၍ မိန်းမပြန်လျင် ပိုက်ပိုက် များများ ထည့်ပေးလိုက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါကြောင်း
SingTel အင်္ကျီအနီဝတ်တဲ့ လူတွေတွေ့ရင် ဝေါင်ဝေါင်ရှေးရမယ်ဟု နားလည်လိုက်ပါကြောင်း (မဟုတ်ရင် လက်ထဲရှိသမျှ ကြော်ငြာစာရွက်အားလုံးကို အမြန်ကုန်အောင် ပေးလိုက်မှာဆိုးရကြောင်း) စတင်းဘုတ်ဝယ်ကြွေးပါမယ်လို့ ဂတိပေးရင်တော့ ၁ မိနစ်ခြားတခါ စာရွက်ဝေတဲ့ အရှေ့က ဖြတ်လျောက်ပြီး စာရွက်များ အမြန်ကုန်အောင် ယူပေးမည်ဟုပြောချင်ကြောင်း SingTel အင်္ကျီဝတ် ဘလော့ဂါများကို ပြောပေးစေလိုကြောင်း...
ကိုဘိုဘို အလုပ်ပြန်ဆင်းရတော့မှာကိုလဲ ဝမ်းသာကြောင်း
ကျန်လူများ အားလုံးကိုလဲ သတိရကြောင်း
နာမယ်ထည့်မရေးတာကလဲ ကျန်တဲ့ အတင်း... သတင်းများကို မသိတော့ကြောင်း
အပေါ်က အနော်နီးမတ် မိုးကုတ်သား ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်.
ဒါ့ထက် ဒီကဗျာဆရာမက ဘယ်သူပါလိမ့်..
Next Time , Inform to me.
I will take 100 times..
အတင်း ( အဲ့ မှားလို့ ) သတင်းကလည်း
မြန်လိုက်တာ. စက်သေနက် ပစ်သလိုပဲ